Fanomanana ny tanora amin’ny asa: hiara-hiasa ny SOS Village d’enfants sy ny Allianz | NewsMada
Fanomanana ny tanora amin’ny asa: hiara-hiasa ny SOS Village d’enfants sy ny Allianz
Nahazo ny loka voalohany, vola mitentina 10 000 euros, ny tetikasan’ny Allianz Madagascar sy ny fikambanana SOS Villages d’enfants Madagascar amin’ny fampiroboroboana ny fahazoan’ny tanora asa mendrika. Haharitra telo taona ny tetikasa, hanao tantsoroka tanora 30 avy amin’ny fikambanana SOS Villages d’enfants eto amintsika sy ny tanora hafa efa noraisina an-tanana amin’ny fotoana maharitra. Hiditra an-tsehatra amin’ny fanoroana ny tanora sy ny fizarana traikefa ny mpiasan’ny orinasa Allianz Madagascar ao anatin’ny toeram-piasany. Ora telo isam-bolana no hatokana ho azy ireo handraisana ny fampitana fahalalana samihafa. Tanjona ny hanosika ny tanora hahafehy ny fidirana ao anatin’ny sehatry ny asa sahady. Ankotra ny loka efa azo, hanome vola 120 tapitrisa Ar, mandritra ny telo taona hanatanterahana ny asa ny Allianz Madagascar.
Niara-nisalahy ny Allianz Madagascar sy ny SOS Villages d’enfants nametraka ny tetikasa fiomanan’ny tanora hisehatra amin’ny asa taorian’ny antso nataon’ny tomponandraikitry ny Allianz social innovation fund. Hetsika iray mamolavola tetikasa sosialy karakarain’ny orinasa ka hanamafy ny fijerena manokana ny tanora sahirana sy marefo raisina an-tanana ao anatin’ny fikambanana SOS Village d’enfants. 25 ny tetikasan’ny SOS Villages d’enfants notanterahina amin’ny firenena 22 iasany, tamin’ity taona ity fotsiny. Natao ny alarobia teo teny Antaninarenina ny fanaovan-tsonia ny fiaraha-miasa teo amin’ny roa tonta.
Ho an’ny fikambanana, 262 ny tanora misitraka ny fampiroboroboana ny tanora ho amin’ny sehatry ny asa. 1 561 kosa ny ankizy misitraka fanabeazana. Misehatra amin’ny fiantohana kosa ny orinasa Allianz ary miasa amin’ny firenena 70 mahery.